Word Swipe 1.3.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.3.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား စကားလံုး Word Swipe
Word Swipe ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပွတ်ဆွဲ အခမဲ့လှပသောရှုခင်းရှုခင်းများနှင့်အတူ Creative & BRAND NEW စကားလုံးရှာဖွေရေးဂိမ်းပါ! ဒါဟာနှိပ်နှင့်သင့်လက်ကိုင်ဖုန်း '' ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့်သင့်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်ဖို့လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့လမ်းနှင့်သင်တို့ကိုပေးပါသည်။
Creative WORD SEARCH ပဟေဠိ
ဝှက်ထားသောစကားများကိုရှာဖွေ• Search နဲ့ပွတ်ဆွဲအက္ခရာများ
•ပေးစာလုပ်ကွက်မှန်ကန်သောစကားများထွက် swiped ခံရပြီးနောက်နှိပ်စက်
•နယူးဝှက်ထားသောစကားလုံးများကိုစာလုံး '' ပြိုကျပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြလိမ့်မည်
သဲလွန်စနဲ့ စွဲ WORD Finder
•နေ့စဉ်ပဟေဠိများအတွက်သဲလွန်စအဖြစ် / စကားလုံးတစ်ခုထားသောစာပိုဒ်တိုများရှိပါသည်
ရှင်းလင်းမှု Animation & အံ့သြစရာရှုခင်း
•တစ်ဦးချင်းစီကိုထိပုတ်ပါသို့မဟုတ်ပွတ်ဆွဲဘို့ကိုရှင်းလင်းရန်ဂရပ်ဖစ်နဲ့ animations တွေကို
•သင်အလွယ်တကူအကူအညီတောင်း "ရှာရန်", "အရိပ်အမြွက်" သို့မဟုတ် "မွှေနှောက်" ကိုသုံးနိုင်သည်
•ပြောင်းလဲခြင်း themes များနောက်ခံအဖြစ်အံ့သြဖွယ်ရှုခင်းများရဖို့
•သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်တတ်နိုင်သမျှပိုပြီး "အပိုဆုစကား" ထွက်ရှာမည်
- စာပိတ်ပင်တားဆီးမှုစတုရန်းအပေါ်ရှာရန်စကားသဲလွန်စ (s) ကိုအညီ
- သင်ဖမ်းရသည့်အခါ "ရှာရန်", "အရိပ်အမြွက်" သို့မဟုတ် "မွှေနှောက်" ခလုတ်ထိပုတ်ပါ
- လုံလောက်တဲ့ဒင်္ဂါးပြားလာပြီအားဖြင့်လှပသော themes များ Unlock
- အဖြေအတွက်တင်ပြကြသည်မဟုတ်သော "အပိုဆုစကား" ကိုရှာပါ
Download ပြုလုပ်ရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့! ယခုမှာ အခမဲ့ အဘို့အပါဆုံးစွဲလမ်းစကားလုံးရှာဖွေရေးဂိမ်းကိုစတင်ရန်!
Word Swipe အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Word Swipe အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Word Swipe အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Word Swipe အား အခ်က္ျပပါ
hot105 စတိုး 5.69k 1.42M
Word Swipe ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Word Swipe အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.3.0
ထုတ်လုပ်သူ Wordfun Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://sites.google.com/site/waprivacypolicy/
App Name: Word Swipe
Release date: 2019-07-04 11:27:46
လက်မှတ် SHA1: 9B:2A:3C:50:07:E5:E4:16:A8:69:A6:1E:F7:76:29:D6:5C:41:EC:C2
Word Swipe APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ